Wadaad kashifay sirta al-shabaab iyo dagaalada ay dalka ka wadaan – Online pharmacy, buy cheap Viagra, discount Viagra, order Cialis
Wadaad kashifay sirta al-shabaab iyo dagaalada ay dalka ka wadaan
Wadaadkaan oo lagu magacaabo Sheekh C/llaahi Sh. Maxamed (Dalab) ayaa sheegay inuu isagu ka mid ahaa xubnihii ku biiray ururka Al-Shabaab markii ay kala jabeen midowga Maxkamadaha Islaamiga ah, isagoona sheegay inuu horay uga tirsanaa ururkii Al-Itixaad ee burburay.
Mid ka mid ah wadaadadii asaastay ururka Al-Shabaab isla markaana la soo shaqeeyay hoggaankooda sare ayaa markii ugu horeysay shaaciyay arrimo fara badan oo Al-Shabaab dhexdooda ka jiray, gaar ahaan khaarajinta xubno muhiim ah oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib, waxyaabihii ku dhaliyay ka bixitaankiisii xarakada Al-Shabaab iyo arrimo kale oo aan weli bannaanka u soo bixin.
Isagoo ka hadlayay waxyaabihii uu arkay mudadii uu ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa wuxuu sheegay inuu mar macallim u ahaa Axmed Godane hoggaamiyihii geeriyooday, isagoona mar u qaabilsanaa ururka Al-Shabaab ururinta Zakada.
“Maalin anigoo u khudbeynaya dadweyne Zako laga ururinayay, ayaan u sheegay in sida ay Al-Shabaab ku dooneyso Zakada aanu sharci ahayn” ayuu yiri Sheekh Maxamed (Dalab) oo sheegay in wixii markaasi ka dambeeyay laga fariisiyay howshaasi.
Dhinaca kale wadaadkaan ayaa sheegay in Al-Shabaab ay siyaabo khaldan u fasiraan diinta Islaamka, isla markaana ay leeyihiin dhaqamadii Khawaarijta oo uu ka dardaarmay Nabi Muxamed CSW.
“Markay arkaan gaalo way ka cararaan, askarta Soomaalida ahna way ku soo cararaan” ayuu yiri Sheekha oo sheegay in Al-Shabaab ay ku guuleysteen inay shacabka Soomaaliyeed ka aamin baxaan wadaadada iyagoo u arkaya inay yihiin kuwo dadka cuna.
Waxaa kale oo uu sheegay in hamigii iyo rajadii ay shacabka ka lahaayeen wadaadada uu meesha ka baxay, taasi oo uu ku eedeeyay inay Al-Shabaab ka mas’uul tahay arrintaasi, bacdamaa ay dadka ku dilaan masaajida, iyo inay ugaarsadaan dadka Muslimka ah.
“Al-Shabaab ayaa ku guuleysatay ujeedada ugu weyn ee gaalada ka lahaayeen Soomaaliya” ayuu yiri Sheekh C/llaahi Maxamed (Dalab) oo sheegay in maanta aanay wadaadadu u tartami karin doorashooyinka dalka ka dhacaya.
Short URL: http://www.ccdsomaliyouth.com/?p=31577
Posted by ccdyouth
on Aug 3 2015. Filed under Wararka maanta.
Previous Previous post: Awning carpets
Next Next post: Chirosoma – about